Loko volo tsara indrindra rehefa manana RosaceaColor ho an'ny hoditra mena ianao - Beauty
tenimiafina diso amin'ny wifi iphone
inona no dikan'ny 2 "
afaka mamafa ny sary iphone
imessage miandry iphone activation
Loko volo tsara indrindra rehefa manana Rosacea ianao - ahenao ny tarehy mena
F: Mijaly amin'ny rosacea aho. Iza amin'ireo lokon'ny volo no afaka manatsara na manaratsy azy? Inona avy ireo loko tokony hialako? Inona no loko manala ny mena ?.
A: Ambonin'izany rehetra izany dia hialako ny alokaloka mahafinaritra sy ny loko misy kitika maintso ary koa volondavenona , tononkalo volontsôkôlà misy fotony miaraka amin'ny oliva vitsivitsy, toy ny blonde mainty. Ny alokaloka manga sy maitso dia miteraka loko volo izay vao mainka mampitombo ny lokon'ny hoditrao.
Misafidiana loko misy volamena (mavo) , tsy miandany, na koa feo fototra volomboasary. Aza atao loko mainty na maivana indrindra. (Toy ny mahazatra, mijanona ao anatin'ny ambaratonga telo amin'ny loko fototra izy ireo.)
Raha mainty volontany ny lokon'izy ireo voajanahary, dia afaka mahita ny sasany amin'ireo mena izy ireo raha manazava ny alokaloka amin'ny loko tsy miandany, fa ny loko mainty kokoa kosa dia hampamirapiratra ny mena amin'ny hoditry ny hoditra. Ny zavatra mitovy amin'izany dia mety hitranga raha manamaivana be ny volonao ianao, ary ny mena dia miharihary kokoa amin'ny maha-mifanohitra azy.
Tokony misafidy loko tsy mifanohitra amin'ny volon'ny volo voajanahary ianao. Raha te handray fanapahan-kevitra tsara ianao dia zahao ny loko voalohany amin'ny volonao amin'ny alàlan'ny fitaratra ary mijery akaiky ny volonao amin'ny tara-masoandro. Ny feon'ny ankapobeny an'ny shimmer ny lokon'ny volo dia mampiseho anao ny loko voalohany amin'ny volonao> Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia: volamena na mavo, mavo-volomboasary, volomboasary, mena-manga, manga, volomparasy, manga-volomparasy, mena-volomparasy, maitso na tsy miandany (tsy misy loko voalohany azo fantarina).
Loko volo tsara indrindra ho an'ny tarehy mena. Anisan'ny lohataona na ririnina ianao raha manana loko maivana na mazava be. Lazainay aminao izay lokon'ny volo mety indrindra aminao:
Lohataona karazana loko
Manana hoditra tsara tarehy ianao miaraka amin'ny volo volamena, mora tohotra, ary manana volo miloko, volontsôkôla na mena.
Marina ireo feo ireo: blonda volamena, blondantely, blonde frezy, mena-bolamena ary volontsôkôlà antonony.
Ny karazana loko ririnina
Manana hoditra maivana be ianao miaraka amina tononkira miloko manga. Ny lokon'ny volonao voajanahary dia mainty na mainty mainty.
Marina ireo feo ireo: aubergine, mahogany, mainty misy volon-java-manga.
Azonao atao ny mahita ireo loko volo ampiasain'ny kintana amin'ny loko volo tsara indrindra amin'ny lokon'ny hoditra mena!
Loko volo ho an'ny hoditra mena . Tian'i Emma Stone ny mifamadika amin'ny mena sy ny blonde. Ny frezy Strawberry dia fitambarana tonga lafatra ary mandeha tsara miaraka amin'ny hodiny mazava. SARY: sary azo
Mazava ho azy fa ny ririnina dia karazana ririnina miaraka aminy Tarehin-tarehin'i Snow White . ny volo mainty volontany tsara ho azy manokana: ny maso manga mamiratra ary ny vava oroka mena dia mahavita ny angano
Nisaraka taminy koa ilay mpilalao sarimihetsika mane blonde voajanahary ary nisafidy volontsôkôlà volontsôkôlà . Soso-kevitra: Afaka mahatratra endrika manjelanjelatra toy izany ianao raha hanitsy ny volonao amin'ny vy fisaka (aza adino ny fiarovana ny hafanana!) Ary avy eo atsipazo mamiratra serum .PHOTO: sary azo
Hitantsika eto miaraka aminy ilay mpilalao sarimihetsika loko volo voajanahary tsara tarehy - to miloko platinum milay izay manasongadina ny volony mamy ary koa ny masony manga mazava. Karazan-koditra mafana tokony misafidy blondy tantely, blonda volamena na blonde cream .PHOTO: sary azo
Ilay mpilalao sarimihetsika Krysten Ritter koa dia afaka nitana andraikitra voalohany amin'ny manaraka Blanche Neige sarimihetsika. Eto volo mainty mifanohitra tsara aminy maivana hoditra ary izy loko mena tianao indrindra . Soso-kevitra: ny volo mainty tsy manjakazaka raha tsy avelanao hianjera amin'ny tarehy izany ary averinao amin'ny rambony na a tsotra
Ny maodely Georgia May Jagger dia manana hoditra misy tononkalo volamena . Araka izany, izy tononkalo mafana mafana - toy ny blond tantely eto - tsara indrindra. Volom-bolamena , rongony rongony na volontany volamena mety ihany koa .PHOTO: GETTY IMAGES
Volontany platinum maivana indrindra mitafy It-Girl Poppy Delevingne. Ity akanjo miloko volo manaitra ity karazana hoditra milay miaraka amina feo manga indrindra tsara . Soso-kevitra: Raha tianao handokoana ny lamba ny volonao ihany, alao antoka fa mifidy jiro miaraka amina rijan-teny manohitra mavo ! SARY: sary azo
Tone-on-tone: ny volontany antonony toa voajanahary manokana miaraka amin'ny toro-hevitra somary namiratra amin'ny mpilalao sarimihetsika satria izy mirindra tsara miaraka amin'ny volomaso sy ny lokon'ny maso. Soso-kevitra: A sakany kely loko amin'ny endrika molotra mena mety amin'ny fijery fanamiana! SARY: GETTY IMAGES
Ny ankafizin'ny Instagram dia malaza amin'ny fanandramana azy amin'ny lokon'ny volo. Eto izy dia mampiseho a miloko fotsy fotsy , izay loko mamirapiratra toy ny a lokomena amin'ny haran-dranomasina na an eyeshadow amin'ny maintso dia ho a tonga lafatra lalao.PHOTO: IMPETRAKA
Manao ny volony i Chloe Sevigny a soedoà maivana blonde, manelatselatra ny fomba maizina . Satria ny lokon'ny hodiny dia manana shimmer volamena kokoa , tokony ho nanoro hevitra azy tsara kokoa izy tononkalo mafana kokoa toy ny tantely na crème blonde. SARY: sary azo.
Torohevitra hikarakarana rosacea
Satria misy karazana rosacea samihafa ( loko mena ), ny fikolokoloana ny hoditra voakasik'izany dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny filan'ny tsirairay. Ny aretina dia mety hitranga amin'ny karazana hoditra rehetra. Vokatr'izany, rehefa misafidy ny vokatra fikarakarana dia tokony horaisina ny fitandremana mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny karazana hoditrao izy ireo. Izay mitarika tompon'andraikitra dia mety samy hafa amin'ny olona iray ihany koa ary tokony hohazavaina amin'ny dermatologista.
Misy fomba maro hanatsarana ny fahatsapana sy ny fisehoan'ny hoditra amin'ny karazana rosacea. Ireo torohevitra ireo dia afaka mampitony ny hoditra ary mampihena ny mena.
1. Diovina sy ampitoniana moramora: Amin'ny rosacea, ny fanadiovana dia tsy tokony hahasosotra ny hoditra marefo. Tokony hohamafisina kosa ny lambanao asidra miaro mandritra ny fanadiovana. Noho izany, ny vokatra fikarakarana ampiasaina ara-dalàna dia misy akony mampitony hoditra toy ny panthenol sy bisabolol. Ny rano amin'ny tarehy dia afaka, aorian'ny fanadiovana, dia manamafy ny vokatra mampitony ary mando. Izy io koa dia mandrindra ny pH an'ny hoditra ary noho izany dia manohitra ny inflammatoire.
2. Fikarakarana fiarovana: Noho ny fahatsapana ny hoditra amin'ny rosacea, tena ilaina ny fikarakarana voajanahary amin'ny akora fiarovana. Tokony hampihena ny fivontosana, ny sambo tery ary hanome vokany mangatsiaka amin'ny fahatsapana hoditra tsara kokoa.
4. Ankafizo ny arovan'ny masoandro: Ny masoandro dia olana amin'ny hoditra izay mirona amin'ny rosacea. Amin'ny lafiny iray, ny taratra UV dia manamafy ny soritr'aretin'ny hoditra amin'ireo marary marobe. Etsy ankilany, ny hoditr'izy ireo dia matetika mihetsika amin'ny hafanana avy amin'ny masoandro miaraka amin'ny fiharatsy. Ny sunscreens, noho izany, dia tsy voatery atao amin'ny filentehan'ny masoandro fotsiny.
Ireo mifikitra amin'ireto toro-hevitra ireto dia manolotra ny hoditra amin'ny fironana amin'ny rosacea izay ilainy: fitsaharana sy fiarovana. loko mena volo ho an'ny lokon'ny hoditra mangatsiatsiaka.
Fanesorana ireo komandy: izay tokony hataonao sy tsy tokony hataonao
Fototra 7 tsara indrindra ho an'ny hoditra vita amin'ny tarehy
Recipe-n'ny sôkôla DIY DIY 7: ampamirapirato ny tavanao!
Azonao ampiasaina ny fanasana vatana mba hanasana ny volonao?
Concealers 10 ambony izay manarona ny toerana maizina melasma indrindra…
Ahoana ny fomba hampijanonana ny volo sy ny fandriam-bolo - ataovy…